पत्रकारको भूमिकाबारे छलफल हुन जरूरी – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पत्रकारको भूमिकाबारे छलफल हुन जरूरी
२०७० फाल्गुन ८, बिहीबार ०३:५५ गते
नेपाली नागरिक समाज पत्रकारको परिचयसँग परिचित छ । त्यस कारण पनि पत्रकारको परिचय र भूमिकाबारे शब्द निर्माण गर्न जरूरी छैन । यो पक्षको मह¤व, उपस्थिति र अनिवार्यताबारे समाज सचेत भइसकेको हुँदा सीधासीधा चर्चा गर्न उपयुक्त ठानिएको छ । र, आउँदो फागुन २१ गते चितवनका पत्रकारहरुको नेता छान्ने समय नजिकिँदै गएको हुँदा समाजको ऐनाका रुपमा समेत परिभाषित पत्रकारहरुको यतिबेलाको सल्बलाहटबारे बुँदागत रुपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, ताकि यो व्याख्याले पत्रकार र समाजका अन्य वर्गसमेत लाभान्वित हुन सकून् ।
१) हिजो र आजका पत्रकार ः
कठै बिचरा हिजोका पत्रकार ! तिनले टुकी र लालटिनको उज्यालोमा कलम चलाए । जनताको शासनव्यवस्था ल्याउन चाहने राजनीतिक दलहरुलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गरे । त्यसबापत यातना सहे । जेल बसे । कहिले आधा पेट, कहिलेकाहीँ भरिपेट र कहिले भोकभोकै कलम चलाए । त्यसको प्रभावले जनतामा परिवर्तनप्रति मोह जाग्यो । जनतामा राजनीतिक चेतनास्तर वृद्धि भयो । परिणाम देखा प¥यो । राजा महेन्द्रले लादेका पञ्चायती व्यवस्थालाई झट्का लाग्यो । इमानदार कलमचालकको प्रयासले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न मद्दत पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा कसैले नचिताएको प्रगति भयो । लेटर प्रेसको ठाउँमा अफसेट प्रेस आयो । अक्षर कम्पोज गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भयो । कम्प्युटर भित्रियो र त्यसमार्फत टाइपिङ गरियो । समयको बचत भयो । काठमाडौँमा छापिएर अन्य जिल्लामा पुग्ने साप्ताहिक पत्रिका जिल्लाजिल्लामा पुग्न सातै दिन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गयो । दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन थाले । पत्रकारिता क्षेत्रमा कमीकमजोरीका बाबजुद प्रशंसालायक विकास भयो ।
तर नरमाइलो पक्ष, हिजो राष्ट्रका लागि पत्रकारिता गर्ने इमानदार पत्रकारहरु क्रमिक रुपले ओझेलमा परे । जनताका लागि उस्तैपरे जीवन बलिदान दिन पछि नपर्ने पत्रकारहरुको मूल्यांकन सरकारले गरेन मात्रै होइन, यतिबेलाका सशक्त युवा पत्रकारहरुले नै हदभन्दा बढी उपेक्षा गरे । कुन पुरानो पत्रकारको योगदान कति भन्ने विषयमा कहिल्यै चर्चा भएन । अघिल्ला पत्रकारहरुबाट हरिहर विरही र किशोर नेपालहरुले सिके । तिनीहरुबाट अरुले सिके । ती अरुबाट हामीले सिक्यौँ । हामीबाट आज भाइबहिनीहरुले सिक्दैछन् । प्रक्रिया यही हो, यही थियो । तर, जानेर वा नजानेर अघिल्ला पुस्ताका पत्रकारलाई पछिल्लो पुस्ताले बेवास्ता गरेको छर्लंगै देखियो । यसलाई ठीक मान्न सकिन्न । अघिल्ला पत्रकारहरुले गोरेटो नबनाइदिएको भए आजकाले कसरी हिँड्थे ? आफैँ गोरेटो खन्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन होला ? जवाफ सजिलो छैन । जीवनभरि पत्रकारितामा समर्पित एक पत्रकार भोलि बिरामी हुँदा सुकोदाम गोजीमा नहुने अवस्था प्रस्ट देखिन्छ । ऊ बिनाउपचार मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ । सम्मान र सन्तुष्टिको कुरा त अझै धेरै टाढाको विषय भएको छ । सरकार वा अन्य पक्षले सम्मान र सहयोग गरोस् वा नगरोस्, आफ्नै परिवारका रुपमा व्याख्या गरिएको पत्रकार महासंघले त गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो स्थिति देखिएन । संगठन चाहिने अन्यथा होइन भने मर्दा वा आपत् पर्दा हो, होइन भने संगठन चाहिँदैन । त्यस कारण, पुराना सम्मानित पत्रकारहरुका बारे युवा पत्रकारहरुले केही न केही सोच्ने बेला भइसकेको छ ।
२) पत्रकार कस्तो हुने ?
पत्रकार भन्नेबित्तिकै समाजका बहुसंख्यक नागरिकले विश्वास गर्छन् । सम्मान पनि गर्छन् । पूर्वमा कुनै शीर्षकमा विकास भयो भने पत्रकारले विकासबारे समाचार लेख्छन् र प्रसारण गर्छन्, त्यसको प्रभावले अन्यत्र विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । एक ठाउँमा कुनै कारणले विनाश हुन्छ, त्यो समाचार अर्को ठाउँमा पु¥याउन पत्रकारले भूमिका निर्वाह गर्छ । यसको प्रभावले अन्यत्रका जनता सजग हुन्छन् र विनाश हुनबाट बँच्न सक्छन् । यस्ता मह¤वपूर्ण कार्य गर्ने भएका कारण पत्रकारलाई जनताले विश्वास गर्छन् र त्यसको साथमा सम्मान पनि गर्छन् । तर, नेपालमा पत्रकारले राजनीतिक दलहरुको दासत्वलाई स्वीकार गर्न पुगे । संसारका अन्य मुलुकहरुमा पत्रकार कुनै दलविशेषका लागि काम गर्ने वा तिनको आदेश मान्ने अवस्थामा हुँदैनन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत पत्रकारहरु दलका नेताको आदेशबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । “के गरौँ हजुर ? कस्तो लेखौँ हजुर ?” भन्न थाले । यसबाट जनतालाई कुन पत्रिकामा छापिएको समाचार ठीक हो, द्विविधा हुन थाल्यो । एउटै घटनालाई कसैले हो लेख्ने, कसैले होइन लेख्ने गर्दा जनता अक्क न बक्क हुन थाले । बिस्तारै–बिस्तारै जनताको प्रश्न हुन थाल्यो– “फलानो पत्रिका कुन पार्टी समर्थक हो ? फलानो पत्रकार कुन पार्टीको हो ?” यो अवस्था विकसित हुँदै जाँदा जनताले सीधै भन्न थाले, पत्रकारले राजनीति गरे । यो कदापि ठीक भएन । राजनीतिक मिसन सकिएको धेरै समय बित्यो, तर पत्रकारले दलकै लागि काम गर्ने अवस्था रहिरह्यो । आजसम्म यो अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
मिनी पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेसले प्रेस युनियन खडा गरेर पत्रकारलाई प्रयोग गरिरहेको छ । एमालेले प्रेस चौतारी भनिरहेको छ र नेपाली पत्रकारलाई जनतातिर कम र आफूतिर ज्यादा बफादार बनाइरहेको छ । प्रचण्ड र वैद्यबावाला माओवादीले पनि क्रान्तिकारी बिल्ला भिराएर पत्रकारहरुलाई औँलामा नचाइरहेको छ । जबसम्म पत्रकार र राजनीतिक कार्यकर्ताको अलगअलग परिचय स्थापित हुँदैन, तबसम्म अन्यौलता समाप्त हुनेछैन । पत्रकारले सिर्फ पत्रकारिता मात्रैलाई गन्तव्य बनाउँछ, तबमात्र पत्रकारकै रुपमा परिचय र सम्मानसमेत पाउने अवस्था आउँछ । त्यस्तो दिन हेर्न पाउने अवस्था पनि यो मुलुकमा आउन सक्छ । त्यसका लागि प्रयास अरुले गरेर हुँदैन, पत्रकारले नै गर्नुपर्छ ।
३) पत्रकारले दुनियाँलाई के दिने ?
हरेक नागरिकले राष्ट्रलाई केही न केही दिनुपर्छ । केही नदिने, सिर्फ लिनेमात्र प्रयास गर्नेलाई इमानदार नागरिक भन्न सकिन्न । त्यसमाथि, पत्रकार हुनुको नाताले मुलुकलाई के दिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले पत्रकारका अगाडि आइनै हाल्छ । पत्रकारले सकारात्मक नकारात्मक दुवैखाले समाचार संकलन गर्ने हो र सम्पादनको जिम्मेवारी लिएकाहरुले परिणाम र निष्कर्ष सम्पूर्णमा सकारात्मक हुनेगरी जनतालाई सुसूचित गर्ने हो । तर, कुनै व्यक्ति वा समूह वा दललाई नियोजित तरिकाले घाटा वा नाफा पु¥याउने उद्देश्यले समाचार वा विचारका रुपमा कलम चलाइन्छ भने, क्रमिक रुपमा सम्बन्धित पत्रकारको इज्जतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ भने अन्य पत्रकारहरुलाई समेत त्यस प्रकारको कामले नकारात्मक असर पु¥याउँछ । आजसम्म जानेर वा नजानेर पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्ता खाले कमजोरीहरु भएका छन् । आउने दिनहरुमा यो खालको कमजोरी हटाउनका लागि प्रयास हुन जरूरी छ । त्यो प्रयास आउने नेतृत्वले गर्न सक्छ ।
४) प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भ ः
दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा भएका छन् । प्रायः हरेक शीर्षकमा भएका छन्, तर अरुको सिको गर्दै एक पत्रकार अर्को पत्रकारको प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन भन्ने ख्याल भने राखेको पाइएन । एक पत्रकारले कुनै एक विषयमा समाचार लेखेको छ भने अर्को पत्रकारले त्यो विषयमा जानकारी लिँदा नराम्रो हुँदैन, तर त्यही विषयमा सहयोगी पत्रकारभन्दा आफू चर्चामा आउने उद्देश्यले नचाहिँदो वा नसुहाउँदो पाराले विषयलाई तन्काउने वा लेपन लगाउने काम गर्न कुनै पनि हालतमा हुँदैन । तर, यो खालको गतिविधि आजसम्म हामीकहाँ भएको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरूरी छ ।
५) हिजोको नेतृत्व र आउने नेतृत्व ः
पत्रकार महासंघ स्थापना हुँदाका बखत र पुरानो युग भनिएको अवस्थामा नेतृत्व पनि उतिसारो बलियो वा फूर्तिलो नभएको हुन सक्छ, तर अब त्यो अवस्था छैन । आउने नेतृत्व हरेक कोणबाट सक्षम हुन जरूरी छ । पार्टी पत्रकारितामा भिजेकाहरुबाट छान्दा योग्य भेटिए ठीकै छ, यदि त्यो अवस्था छैन भने पार्टीको टिकट लिएर नबसेकाहरुबाटै अब नेतृत्व छानिनुपर्छ । विवेकलाई बेचेर वा बन्धकी राखेर बोल्ने, व्यवहार प्रदर्शन गर्ने पत्रकारको नेता अबचाहिँ कुनै पनि हालतमा बन्न सक्दैन, बनाउन हुँदैन ।
६) नेता त्यस्तो होस्, जो इमानदार होस् ः
आफू संलग्न भएको पत्रिका वा रेडियो वा टेलिभिजनलाई मात्रै विज्ञापन दिनुस्, बाँकी मरे मरुन् भन्ने चिन्तनवाला पत्रकारलाई चितवन पत्रकार महासंघको अध्यक्ष आउने दिनमा बनाउने प्रयास कतैबाट हुनुहुँदैन । अध्यक्ष पैसाप्रेमी नहोस्, पत्रकार–पत्रकारबीचमा फूट पैदा गरेर आफू हालीमुहाली गर्ने खालको नहोस् । मर्दापर्दा आफ्ना संगठनका साथीहरुलाई सहयोग गर्न सदा तत्पर रहने खालको होस् । अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको होस्, ताकि इमानदार पत्रकारहरु सदस्यता नवीकरण गर्न नहिच्किचाऊन् ।
७) सबैभन्दा कठिन पेसा ः
दुनियाँले विश्वास मान्ने वा नमान्ने बेग्लै कुरा हो, तर पत्रकारिताजस्तो कठिन र संवेदनशील पेसा मान्छेको दुनियाँमा अरु छँदै छैन । यतिविघ्न संवेदनशील पेसामा आउन चाहनेहरुलाई कठिनाइबारे जानकारी दिनैपर्छ । हाम्रो समाज आज पनि अरु देशको तुलनामा विकसित भइसकेको समाज होइन । यही अवस्थामा पत्रकारितामा पूर्ण व्यावसायिकता लागू गर्न सकिँदैन । पूर्ण व्यावसायिकताबिना पत्रकार र उसका परिवार आर्थिक दृष्टिकोणले सुरक्षित हुन कठिन हुन्छ । यति भइकन इज्जतका खातिर बेइमानी गर्न पाइँदैन, सकिँदैन । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा आँखा चिम्लिएर अन्जान र काँचाहरुलाई यो क्षेत्रमा जबर्जस्ती धकेल्नुको सट्टा यसभित्रको सबैखाले अवस्थाबारे जानकारी गराउनु कर्तव्य हुन आउँछ । यो कर्तव्य पालना गर्न हिजोको नेतृत्व चुकेकै हो । आउने नेतृत्व त्यस कारण पनि सचेत र सक्षम चाहिन्छ ।
८) जोडिएको इज्जत ः
एक पत्रकारको इज्जत अर्को पत्रकारसँग जोडिएको हुन्छ । एक पत्रकारले राम्रो काम गर्दा सबै पत्रकारको शिर ठाडो हुन्छ भने गलत काम गर्दा देशभरिका पत्रकारहरुको इज्जतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ । यो तथ्यलाई मनन् गर्दा भन्नैपर्छ– जिम्मेवार पेसा अँगालेपछि इज्जत र मर्यादालाई बिर्सन हुँदैन । यदाकदा पत्रकार महासंघका सदस्यहरुमध्ये कोही आर्थिक मामलामा लटरपटर गरेको काण्डमा फस्ने गरेका सुनिन्छ । यस्तो कर्मबाट जिल्लाभरिका मात्रै होइन, देशैभरिका पत्रकारहरुको नाकमा कालो पोतिन्छ । पत्रकारहरुलाई आर्थिक र अन्य मामलामा सचेत रहन खबरदारी गर्ने खालको नेता अबको आवश्यकता हो, यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
यसरी अब पत्रकारहरु अधिवेशन नजिक आउँदाका बखत मात्रै सल्बलाउने होइन, संगठनका साथीहरुको भावना बुभ्mने, सुखदुःखमा साथ दिने खालको हुनुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा इमानदारिता प्रदर्शन गर्ने पत्रकारलाई हौसला बढाउने र पेसागत मर्यादालाई नाघेर अनेकअनेक गर्ने पत्रकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्ने पत्रकार अबको नेता बन्न लायक देखिन्छ । बाँकी काम अब अध्यक्षको कुर्सी ताक्ने युवा पत्रकारहरुको ।